M/weyne Shariif iyo wafti uu hoggaaminayo oo ka qaybgalaya shirka wadamada Islaamka. – Radio Daljir
M/weyne Shariif iyo wafti uu hoggaaminayo oo ka qaybgalaya shirka wadamada Islaamka.
Nofeembar 9, 2009 12:00 b 0
Istambul, Nov 09 – Magaalda Istambul ee caasumadda dalka Turkiga maanta waxaa si rasmi ah uga furmay shir ay yeelanayaan madaxda in ka badan 40 waddan oo muslim ah. Shirkaasi oo socon doono muddo laba maalmood ah, Soomaaliya waxaa uga qaybgaliya wafti uu hoggaaminayo m/weynaha dawladda federalka Soomaaliya Shariif Sheekh Amed, kaasi oo iskugu jira golayaasha xukuumadda, baarlamaanka iyo mas?uuliyiin sar sare oo ka tirsan xafiiska m/weynaha.
Muddada labada maalmood ah ee shirkaani socon doona waxaa madaxda dalalka islaamku uga wada hadli doonaan arrimo badan oo quseeya wadamada islaamka ah, kuwaasi oo ugu horrayso is xiriirinta dalalkaasi, ka hadalka dhaqaalaha adduunka ee sii xumaanaya iyo saamaynta uu wadamada islaamka ah ku yeeshay, iyo arrimo kale oo dhammaantood taabanaya caalamka islaamka.
Wufuudka Soomaalida ee ka qayb galaysa shirkaasi ee uu horkacayo m/weyne Shariif, ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan xaaladaha dhaqaale ee dalka, siyaasadda, ammaanka, dib u heshiisiinta iyo waliba arrimaha bini?aadannimo ee dalka Soomaaliya iyo sidii caalamka islaamku gacan uga gaysan lahaa taabo galin hannaan dawladnimo oo Soomaaliya ka hana qaada.
Horay dalka Turkiga waxaa ugu sii sugnaa wafti kale oo ka socday dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya, waftigaasi oo uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga C/rashiid Maxamed Xirsi ?Cirro?, waxaana intii ay joogeen halkaasi ay kulamo la yeesheen mas?uuliyiinta dawladda Turkiga oo uu ka mid yahay m/weyne Cabdalle Guul.
Md. Cirro waxaa uu sheegay wada hadalladii ay la yeesheen madaxda Turkiga in ay ku qotomeen isla markaana ay dhammaantood ku salaysnaayeen baahiyaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya, wuxuuna intaasi ku daray in ay isla meel dhigeen waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Sikastaba ha ahaatee marka uu shirkaani soo gaba-gaboobo, ayaa waxaa lagu wadaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah oo wax ka taraya baahiyaha taagan ee laga wada hadlayo.
M/weyne Faroole iyo wafti oo hoggaaminayo oo maanta u safray dalka dibaddiisa.